Budata PUBG maka Windows
Free Budata maka Windows (1945.60 MB)
PUBG bụ egwuregwu royale nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na kọmputa Windows na mobile. Na PUBG, nke na - eme ka ọnụọgụ ndị egwuregwu na ekwentị na PC na - abawanye site na mmelite na - aga nihu, onye ọ bụla nwere otu ebum nuche: ịlanarị! Egwuregwu ahụ, nke dị dị ka PUBG PC (budata) na Windows na PUBG Mobile (budata) na mkpanaka mkpanaka ahụ, ruru oge iri na abụọ dịka nke June 2021 wee nata mmelite 12.1. Budata egwuregwu PUBG ugbu a iji sonyere agha royale. Kọmputa gị usoro chọrọ adịghị mma? Nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwu PUBG na-enweghị nsụgharị ma ọ bụ kefriza na PUBG Mobile (APK).
PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS, ma ọ bụ PUBG na nkenke, nwere ike ịkọwa dị ka egwuregwu lanarị nịntanetị nke na-enye ndị egwuregwu ohere ahụmịhe ha agaghị echefu echefu. Budata PUBG ugbu a sonyere ọtụtụ ijeri ndị egwu na-egwu PUBG!
PUBG, egwuregwu TPS ụdị egwuregwu ị nwere ike igwu na kọmputa gị, na-enye ndị egwuregwu ihe ngosi dị ka agụụ Agụụ egwuregwu. Ebe ndị a hapụrụ ahapụ na mmepeanya dara ada na-echere anyị negwuregwu ahụ, nke na-ewere ọnọdụ na ụwa post-apocalyptic. Nọgbọ agha nke ụwa a, onye ọkpụkpọ ọ bụla ga-alụ ọgụ na ndị egwuregwu ndị ọzọ nọgbọ agha sara mbara nke dị kilomita asatọ iji lanarị ma lụọ ọgụ ka ọ bụrụ naanị onye mmeri nke egwuregwu ahụ.
Etu esi egwu PUBG?
Onye ọkpụkpọ ọ bụla na-abanye nọgbọ agha na PLAYERUNKNOWNS BATTLEGROUNDS na-amalite mgba ha maka ịlanarị na usoro nha anya. Ndị na-egwu egwu ga-enyocha map iji chọta ngwá agha ma ọ bụ akụrụngwa. Mgbe ị chịkọsịrị ngwá agha na akụrụngwa fọdụrụ na isi ụfọdụ, ị ga-achọpụta ebe ndị egwuregwu ndị ọzọ nọ ma kpochapụ ha notu notu. Obere ngwa agha na akụrụngwa pụtakwara ịlụ ọgụ maka njikwa maka ihe ndị a. Ndị na-egwu egwu na-agbagharị megide oge; nihi na agha ahụ na-adịwanye warara na ndị egwuregwu ndị fọdụrụ nọgbọ agha ji nwayọ tufuo ahụ ike ha.
PUBG na-enye eserese anọ dị iche iche na njirimara gafee usoro egwuregwu niile: Erangel (8 x 8 km), Miramar (8 x 8 km, Sanhok (4 x 4 km) na Vikendi (6 x 6 km). Ọ bụrụ na ị na-abanye na map a, kwadebe maka agha na-egbu egbu! Otu atụmatụ nke maapụ ahụ bụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mpaghara ga-enye ndị egwuregwu akụrụngwa. Ebe ndị a na-ejupụta ebe niile ndị egwuregwu chọrọ igbu ibe ha. na Sanhok bụ Bootcamp, Pai Nan, Paradise Resort, Ruins, Docks wdg. Ebe ndị a tụrụ aro na map Vikendy bụ otu nime ha bụ Podvosko, Dobro, Mesto, Movatra, Goroka, Villa, Castle.Ihe dị iche iche nke maapụ Miramar bụ na o nwere nnukwu mpaghara yana ebe ndị ahụ dị anya. Havekwesịrị ịhazi oge ahụ nke ọma iji ruo otu ebe na-enweghị funfu. Mana tupu ịbanye PUBG loot ebe, kwadebe maka nsogbu siri ike.
PUBG chọrọ usoro
Yabụ, kedu ntakịrị usoro chọrọ maka igwu egwu PUBG? Opekempe usoro chọrọ maka PUBG bụ:
Sistemụ nrụọrụ: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit
Ebe nchekwa: 8GB Ram
Kaadị vidiyo: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
Neti: Njikọ Ntanetị Broadband
Ebe nchekwa: oghere 30GB nefu
Na kọmputa na ngwaike a, ị ga-egwu PUBG na ntọala kachasị ala, ọ bụghị ntọala kachasị mma maka ahụmịhe egwuregwu. Usoro usoro akwadoro maka PUBG bụ:
Ebe nchekwa: 16GB Ram
Kaadị vidiyo: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
Na 144fps, usoro ihe akwadoro maka ịsọ mpi egwuregwu bụ:
Processor: Intel i9-9900K 3.6GHz, 32GB / AMD Ryzen 7 3800X
Ebe nchekwa: 32GB Ram
Kaadị vidiyo: NVIDIA GeForce GTX 2060 Super / AMD Radeon RX 5700
A chọrọ usoro sistemụ maka arụmọrụ kacha mma na fps dị elu na nlele ọnụọgụ ume dị elu ana-akpọ dị ka ndị na-egwu egwuregwu.
Nha faịlụ: 1945.60 MB
Mmepụta: Bluehole, Inc.
Kacha ọhụrụ na: 06-07-2021
Budata PUBG PUBG bụ egwuregwu royale nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ na kọmputa Windows na mobile....
Oku ọrụ: Vanguard bụ egwuregwu FPS (onye na-agba ụta nke mbụ) nke egwuregwu Sledgehammer meriri....
Valorant bụ egwuregwu FPS na-egwu egwuregwu efu nke Riot. Valorant egwuregwu FPS, nke na -abịa na...
Budata Fortnite ma bido igwu egwu! Egwuregwu Fortnite bụ egwuregwu egwuregwu larịị na-ekwenye...
Agha 2042 bụ ọtụtụ mmadụ lekwasịrị anya mbụ onye shooter (Fps) egwuregwu mepụtara dais, nke...
Wolfteam, nke dị na ndụ anyị kemgbe 2009, na-adọta uche na atụmatụ ya pụrụ iche, nke anyị na-akpọ...
Counter-Strike 1.6 bụ otu nime egwuregwu ndị ama ama nke usoro Counter-Strike, nke malitere ndụ ya...
Ofwa nke Warcraft abụghị naanị egwuregwu, ọ bụ ụwa dị iche maka ọtụtụ ndị egwuregwu. Ọ bụ ezie na...
Paladins bụ egwuregwu ị kwesịrị ị na-atụ uche ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu egwu kpụ ọkụ nọnụ fps. Na...
Chernobylite bụ egwuregwu egwuregwu egwu egwu rpg dị egwu sci-fi. Chọgharịa akụkọ na-enweghị ahịrị...
Dota 2 bụ ogige egwuregwu egwuregwu ọtụtụ egwuregwu nịntanetị - otu nime nnukwu asọmpi egwuregwu dị...
Kwuo maka ime ihe na-enweghị njedebe na ụwa nke ọgba aghara na Cross Fire na-achịkwa. Na-eweta...
Hades bu roguelike ihe eji egwu egwu nke ndi SuperGiant dere ma buputa. Ugboro nyocha nke rpg, nke...
Ndewo Neighbor bụ egwuregwu egwu nke anyị nwere ike ịkwado ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ oge na -atọ ụtọ....
Chivalry 2 bụ egwuregwu mbanye anataghị ikike & slash edinam egwuregwu mepụtara Torn Pụrụ Iche...
Njikọ nke Akụkọ Ifo, nke a makwaara dị ka LoL, bụ nke Riot Games wepụtara na 2009. Studiolọ...
Team Ebe e wusiri ike, nke mbụ wepụtara dị ka ihe tinye na na Ọkara-Ndụ, nwere ike ugbu a na-egwuri...
Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake bụ ihe emereme njem egwuregwu na obere egwuregwu...
Ndị ọkwọ ụgbọ ala nke Assassin bụ egwuregwu na -arụsi ọrụ ike ebe anyị na -alụ ọgụ megide ndị ohi...
Detroit: Ghọọ mmadụ bụ ihe omume-njem, neo-noir thriller egwuregwu nke Quantic Dream mepụtara....
Download Apex Legends, ị nwere ike ịnweta egwuregwu nụdị nke Battle Royale, otu nime ụdị egwuregwu...
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bụ sniper egwuregwu nke CI Games mepụtara. Na SGW nkwekọrịta 2,...
Otu nime ụdị ndị natara nlebara anya kachasị na akụkọ egwuregwu vidio dị ugbu a bụ doro anya FPS. Ọ...
Halo 4 bụ egwuregwu Fps nke pụtara na ikpo okwu PC mgbe ihe egwuregwu Xbox 360 gasịrị. Emepụtara...
Obodo Ọjọọ Ọjọọ bụ egwuregwu egwu egwu nke Capcom mepụtara. Isi nke asatọ nke usoro obibi nke Ọjọọ,...
Download Assassins Creed Valhalla ma banye nime ụwa miri emi nke Ubisoft kere! Nịbụ ndị mepụtara na...
Site na nbudata Mafia: Definitive Edition ị ga - enwe egwuregwu mafia kachasị mma na PC gị. Mafia:...
Project Argo bụ egwuregwu FPS ọhụrụ nke Bohemia Interactive, nke mepụtara egwuregwu Fps na-aga nke...
Enwere ike ichikota UnnyWorld dị ka egwuregwu MOBA nke na -enye ahụmịhe egwuregwu na -atọ ụtọ na...